Wararka - Qaybaha kala duwan ee wax lagu qodayo qaybo kala duwan oo qiimo-XCMG ah oo ka kooban qaybaha wax lagu qodayo suuqa-Guryaha Waxyaabaha
Excavator qaybo kala duwan oo waalka ah qaybo kala duwan oo qiimo-XCMG ah oo ka mid ah qaybaha wax lagu qodayo suuqa-Guryaha Waxyaabaha
Dhawaan, macaamiil badan ayaa wax ka weydiinaya qiimaha qalabka kala-baxa ee hawo-mareenka badan. Macaamiisha qaar waxay u maleeyaan in oraahdu aad qaali u tahay, maxay iyagu uga jaban yihiin? Dinaal iyo dinaar, waalka siyaabaha badan ee Guriga Qodista ayaa tayo fiican leh. Tani waa dammaanadda ugu fiican ee macaamiisha.Inkastoo aan la halgameyno qiimaha, waa inaan sidoo kale tixgelinno tayada iyo iibka kadib, si aanan u lumin waxyaabaha waaweyn.
Dhab ahaan asalka dhabta ah ee Kawasaki XCMG qoda badan, nooc: Kawasaki, meesha uu ka soo jeedo: Japan, moodeelka la adeegsan karo: XE370CA, moodeelka: KMX32N / B45012B, lambarka qalabka: 803007126, guriga nadiifka ah ee qaybaha qodista XCMG suuqyada, iyadoo la isticmaalayo shubasho isku dhafan, Compact qaabdhismeedka, waxqabadka xasilloon, dayactirka fudud iyo isticmaalka, kaabayaasha saafiga ah, hubinta tayada. Telefoonka latalinta: +86 1805224003
Yaan rabin inuu iibsado qaybo wanaagsan oo tayo sare leh sida qalabyada kala duwan ee qalabka wax lagu qodayo? Isticmaalka qalabka been abuurka ah iyo kuwa liita ayaa saameyn ku yeelan doona waxqabadka mashiinka, waxaana laga yaabaa inuu si aad ah u gaabiyo nolosha mashiinka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira tusaalooyin aad u tiro badan oo ah qalab been abuur ah oo u eg qalab dhab ah suuqa. Way adagtahay in lakala saaro runta iyo beenta muuqaalka. Iibsadayaashu way dukaameysan doonaan inta aysan iibsan, mana hunguriyi doonaan xulashooyinka yaryar iyo kuwa raqiiska ah ee kaabayaasha qodista ee aadka u jaban. Sida oraahdu u socoto: kaliya marka ay jirto meel, dooro iibiye lagu kalsoon yahay oo ka mid ah qalabka wax lagu qodayo si aad u iibsato qodista lagu kalsoon yahay. Qalabka mashiinka.
Suuqa Wuzhijia qaybaha qodista asalka ah, hadaad xiisaynayso ama aad wax su'aalo ah ka qabtid qalabka kor ku xusan ee qalabka wax lagu qoro ee kala duwan, fadlan wac: +86 18052224003, Wuzhijia —— diirada · xirfadle · hufan · dammaanad qaad hal qeyb oo mashiinka qodida.